सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वर भन्नुहुन्छ, “परमेश्‍वरको सेवा गर्नु कुनै साधारण काम होइन। जसको भ्रष्ट स्वभाव अपरिवर्तित रहन्छ उसले कहिले पनि परमेश्‍वरको सेवा गर्न सक्दैन। यदि तेरो स्वभावलाई परमेश्‍वरका वचनहरूद्वारा न्याय गरिएको र सजाय दिइएको छैन भने, तेरो स्वभावले अझै शैतानलाई नै प्रतिनिधित्व गर्दछ जसले के प्रमाणित गर्छ भने तैँले तेरो आफ्नै असल अभिप्रायहरूबाट सेवा गर्छस्, तेरो सेवा तेरो शैतानी स्वभावमा आधारित छ। तैँले आफ्‍नो स्वभाविक चरित्रद्वारा, र तेरा व्यक्तिगत अभिरुचिहरू अनुसार परमेश्‍वरको सेवा गर्छस्। यति मात्र होइन, तँ सँधै सोच्छस् कि तैँले गर्न चाहेका कुराहरूले परमेश्‍वरलाई खुशी तुल्याउँछ, र तैँले गर्न नचाहने कुराहरू परमेश्‍वरको निम्ती घृणित छन्; तँ पूर्ण रूपमा तेरा आफ्नै अभिरुचिहरू अनुसार काम गर्छस्। के यसलाई परमेश्‍वरको सेवा गरेको भन्न सकिन्छ? अन्ततः तेरो जीवन स्वभावमा हल्का परिवर्तन पनि हुनेछैन; यसको सट्टामा, तेरो सेवाले तँलाई अझै हठी बनाउनेछ, जसद्वारा तेरो भ्रष्ट स्वभावले अझै गहिरो जरा गाड्छ, र त्यस्तै, परमेश्‍वरको सेवाको बारेमा तँभित्र मुख्यतया तेरो आफ्नै चरित्रमा आधारित नियमहरू, र तेरो आफ्नै स्वभाव अनुसार तेरा सेवाबाट व्युत्पन्न अनुभवहरू बन्नेछन्। यी मानिसका अनुभवहरू र पाठहरू हुन्। यो संसारमा जिउने सम्‍बन्धी मानिसको दर्शनशास्त्र हो। यस्ता मानिसहरूलाई फरिसीहरू र धार्मिक अधिकारीहरूको रूपमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। यदि तिनीहरू कहिल्यै बिउँझिँदैनन् र तिनीहरूले कहिल्यै पश्‍चात्ताप गर्दैनन् भने, तिनीहरू पक्कै झूटा ख्रीष्टहरू र ख्रीष्ट-विरोधीहरूमा परिवर्तन हुनेछन् जसले आखिरी दिनहरूमा मानिसहरूलाई धोका दिन्छन्। पहिले नै भनिएका झूटा ख्रीष्टहरू र ख्रीष्ट-विरोधीहरू यस्ता मानिसहरूका बीचबाट खडा हुनेछन्” (वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छको “धार्मिक सेवालाई शुद्ध पारिनैपर्छ”)। परमेश्‍वरका वचनहरूको यो खण्डले मलाई ढोङ्गी फरिसीहरू र पादरी र हैसियत भनेपछि मरिहत्ते गर्ने ती सबै दुष्ट ख्रीष्ट-विरोधीहरूको बारेमा याद दिलाउँछ। परमेश्‍वरले तिनीहरूको बारेमा नै कुरा गरिरहनुभएको छ भन्‍ने मलाई लाग्थ्यो। परमेश्‍वरले सिद्धान्तमा हामी सबैमा भएको कुरालाई प्रकट गरिरहनुभएको छ, र मसँग पनि त्यस किसिमको भ्रष्ट स्वभाव छ भन्‍ने मलाई थाहा थियो। तर ममा आफ्‍नो बारेमा सच्‍चा बुझाइ थिएन, त्यसकारण कहिलेकहीँ फरिसीहरू, ख्रीष्ट-विरोधीहरू, र छलीहरू साँच्‍चै मभन्दा टाढाका कुरा हुन् भन्‍ने लाग्थ्यो। म त्यस्तो थिइनँ, र म कहिल्यै पनि त्यो बिन्दुमा पुगेकी थिइनँ। म विश्‍वासी भएको धेरै वर्ष भयो, मैले असल कुराहरू गरेकी छु, र मेरो कर्तव्यमा म मूल्य चुकाउँथें। मण्डलीले मलाई जे कर्तव्य सुम्पे पनि, मैले यसको पालन गरेर अघि बढाउँथें। यसको साथै म अगुवा बन्‍ने प्रयासमा लागिपरेकी थिइनँ, र मसँग कुनै हैसियत होस् वा नहोस् म मेरो कर्तव्य पूरा गरिछाड्थेँ। म कसरी ख्रीष्ट-विरोधी, छलीमा परिवर्तन हुन सक्थेँ र? तर वास्तवमा, म पूर्ण रूपमा मेरा धारणा र कल्‍पनाहरूमा जिइरहेकी थिएँ, र पछि तथ्यहरूको सामना गरेपछि, मलाई मेरा यी धारणाहरू पूर्ण रूपमा गलत छन् भन्ने थाहा भयो।
म २० वर्षअघि एक जना एल्डर मार्फत इसाई भएको थिएँ। उहाँले मलाई ब्रह्माण्डका सबै कुरामध्ये साँचो परमेश्‍वर एउटै मात्र हुनुहुन्छ, जसले...